China Steel H beam fanamboarana sy orinasa | Rainbow
H BEAMSBeams dia manana endrika sy habe samihafa. Ny andry fananganana dia singa iray mirindra izay mitondra enta-mavesatra amin'ny fanoherana ny fihenan-kery avy amin'ny hery midina. Ny sakany marindrano dia lehibe kokoa noho ny sakany na ny halaliny. Ny balizy dia miavaka amin'ny mombamomba azy, ny halavany ary ny fitaovany. Ireo karazana mahazatra indrindra ...
Ny balizy dia misy endrika sy habe samihafa. Ny andry fananganana dia singa iray mirindra izay mitondra enta-mavesatra amin'ny fanoherana ny fihenan-kery avy amin'ny hery midina. Ny sakany marindrano dia lehibe kokoa noho ny sakany na ny halaliny. Ny balizy dia miavaka amin'ny mombamomba azy, ny halavany ary ny fitaovany. Ireo karazana mahazatra indrindra dia mitovy amin'ny Capital I na Capital H. Ampiasaina amin'ny asa fanamboarana, injeniera sivily, milina mavesatra, fanamboarana kamio ary asa hafa mavesatra. Beam no ampiasaina matetika hanohanana ireo rafitra mavesatra. Ny beam dia misy amin'ny karazany Aluminium, Stainless Steel ary Hot Rolled.
Fanondroana sy terminolojia
• Any Etazonia, ny tadin'ny vy dia matetika voalaza amin'ny fampiasana ny halalin'ny sy ny lanjan'ilay andry. Ohatra, ny andry "W10x22" dia sahabo ho 10 in (25 cm) ny halaliny (haavon'ny anarana I-andry avy amin'ny endrika ivelany flange iray mankany amin'ny endrika ivelany an'ny flange hafa) ary milanja 22 lb / ft (33 kg / m). Tsara homarihina fa ny fizarana flange malalaka dia matetika miovaova amin'ny halalin'izy ireo. Raha ny andiany W14 dia mety ho lalina amin'ny 22,84 in (58,0 cm) izy ireo.
• Any Mexico, ny vy-by I dia antsoina hoe IR ary matetika voalaza amin'ny fampiasana ny halalin'ny sy ny lanjan'ireo andry. Ohatra, ny andry "IR250x33" dia sahabo ho 250 mm (9.8 in) ny halaliny (haavon'ny hazavam-batra avy eo amin'ny endrika ivelany flange iray mankany amin'ny endrika ivelany an'ny flange hafa) ary milanja 33 kg / m (22 lb / ft).
Ahoana ny fandrefesana:
Haavo (A) X Web (B) X Flange Width (C)
M = Beam-by Junior na Tady Bantam
S = Steel Standar I
W = Tavoahangin'ny flange Standar
Miara-miasa betsaka amin'ireo mpamokatra mpamantatra tariby sy mpamokatra masoandro manerantany izahay mba hanampiana azy ireo hanatsara ny haben'ny habeny ary hampihena ny vidin'ny lozisialy. Amin'ny fiaraha-miasa aminay, ireo mpamatsy ny rafitra array dia afaka manatsara ny vokatra vidiny sy ny fandaharam-potoana fandefasana azy ireo hahazoana antoka ny tombony amin'ny fifaninanana.
Ny fitaovana dia vita amin'ny H-beam mahazatra an'ny amerikana malalaka miaraka amin'ny fenitry ny ASTM A6. Ny naoty vy dia azo fidina eo anelanelan'ny ASTM A572 GR50 / GR60, ASTM A992 na Q355. Ny galvanizing mafana dia mihaona amin'ny fenitra ASTM A123, ISO1461 ary AS / NZS4680. Mazava ho azy, faly koa izahay fa mihaona fenitra hafa momba ny kalitao sy ny hatevin'ny HDG samihafa ho an'ny mpanjifanay, satria fanaonay ny mamaly haingana ny filan'ny mpanjifa ary mihetsika avy hatrany. Ny lisitra maharitra maharitra an'ny orinasa amin'ny famaritana mahazatra ny WF beam 2000 taonina, mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa haingana indrindra.
Ankafizinay ny tetikasan'ny mpanjifanay rehefa mankafy ny vokatray izahay. Miara-miasa amin'ny mpanjifanay izahay manomboka ny tetik'asa, ny vahaolana famonosana sy ny fandefasana tsaratsara kokoa, ny fandaharam-potoana fandefasana maivana kokoa ary ny fanaraha-maso ataon'ny antoko fahatelo dia samy hanana izany fiheverana izany avokoa. Na dia aorian'ny nahavitan'ny tetikasa aza, ny mpanjifantsika manerantany dia mbola afaka miantehitra amin'ny serivisinay aorian'ny varotra mba hahazoana antoka fa hampiasaina amin'ny fomba mandaitra ny vokatra ao anatin'ny fotoana maharitra.
1. Afaka manome maimaimpoana ny santionany izahay.
2. 20 taona amin'ny fanamboarana sy fanondranana vy.
3. Fandefasana ao anatin'ny 25 andro.
4. Fonosana fonosina amina fonosana vy na arakaraka izay ilaina.
5. Amidio amina firenena maherin'ny 50 amin'ny kaontinanta 6.
6. Fitaovana ara-tontolo iainana: Azo ampiasaina imbetsaka ary azo ampiasaina indray
7. Fotoam-pananganana fohy kokoa, mampiasa fotoana bebe kokoa
Ny jiro vy anay dia be mpampiasa amin'ny Solar Energy Systems, fananganana firafitra vy, zavamaniry indostrialy, tranobe sivily, tetezana, fonosana mandeha amin'ny làlamby sy tetik'asa fananganana hafa, noho ny tombony azony amin'ny miondrika, ny fanamboarana tsotra, ny vidiny ambany ary ny lanjany maivana.
Size 100 * 50-700 * 300mm
Web matevina 5-16mm
Web Width 50-300mm
Ny hatevin'ny flange 4.5-23mm
Flange Sakany 50-400mm
Kilasy vy SS400, ASTM36, S235jr, S235jo, Q235B ary Q345B sns.
Malagasy ASTM, ANSI, GB, DIN, JIS, EN, ISO.
Fitsaboana ambonin'ny tany Hotobohanina mafana, hosodoko na mainty.
halavan'ny 1m-12m, an'ny mpanjifa
Teo aloha: Takelaka vy
Manaraka: Sodina mandeha amin'ny herinaratra
Firafitra Steel China H Beam
Fametrahana mazava tsara amin'ny fantsom-piolaka vy
Famaritana mazava tsara amin'ny vy- Punching hole amin'ny Ste ...
Precision Process amin'ny Steel-C Channel miaraka amin'ny welde ...
Fametrahana mazava tsara eo amin'ny antontam-bato vita amin'ny vy
Anti-harafesina vy sodina ambanin'ny tany epoxy pow ...